Paresitina - ALinks
Kufamba Pasina Visa Munyika yePalestine
April 27, 2020 Karuna Chandna Paresitina, famba, vhiza
Palestine ine mukurumbira kwazvo sekukwezva kwevashanyi. Sezvo gore rega rega vashanyi vazhinji vanouya pano kuzoona nzvimbo dzakanaka munyika. Gungwa Rakafa ndiyo yakadzikira pasi penyika. Iri muPalestine chete. Saka, kana iwe
Sei Kuti Uwane Basa, Rondedzero Pamusoro Paid Mabasa muPalestine
April 27, 2020 Maitri Jha mabasa, Paresitina, famba
Pfumisa nemiti yemiorivhi, mahombekombe akanaka, uye aine nzvimbo mazana matanhatu nemakumi matanhatu ekugadzira mabwe, Palestine zvirokwazvo inzvimbo yakanaka yekushanyira. Pasinei nehukama hwese hwakaipa naIsraeri. Geographical Palestine iri kuMadokero chikamu cheAsia. Kwete izvi chete
Yakanakisa Nguva Yekushanyira uye Ongorora Palestine
February 13, 2020 Antika Kumari Paresitina, famba
Yakanakisa nguva yekushanyira Palestine Nguva yakanaka yekuongorora nekushanya ndeye kubva munaKurume kusvika munaKurume uye kubva munaGunyana kusvika Nyamavhuvhu. Kana mamiriro okunze achidziya, zuva uye rinonyanya kuoma. Mwedzi yezhizha yaJune kusvika Nyamavhuvhu zvine mukurumbira
Best Zvipatara In Palestine
February 13, 2020 Shubham Sharma utano, Paresitina, famba
Kuchengetwa kwePalestine kunosanganisira zvipatara zvakavanzika uye zvisiri zveakazvimiririra. Pazasi iwe unogona kuwana iyo rondedzero yezvimwe zvakanakisa zvipatara muPalestine. Rondedzero yechipatara inopihwa kumatunhu matatu aya kunyanya: East Jerusalem, West Bank, uye Gaza Strip. kukurumidza,
Nzvimbo Dzakanakisisa Dzekugara MuPalestine
February 13, 2020 Maitri Jha Hotels, Paresitina, famba
Palestine iri munharaunda yekumabvazuva kweMedithera iyo hapana chimwe kunze kwenzvimbo yechazvino yeIsrael nenzvimbo dzePalestine dzeGaza Strip pamwe nemhenderekedzo yegungwa reMedithera uye West Bank pamwe nenzvimbo kumadokero